Umyezo | December 2021
Ungazigcina njani iikati ngaphandle kwegadi- Iindlela ezili-9 zokuNqanda iikati ezivela egadini
Fumanisa ukuba ungazigcina njani iikati ngaphandle kwegadi kunye nendlela yokumisa iikati zitsala egadini yakho ngezi zimvo zithintelayo, ekusebenziseni iingqalutye kulinywa le lavender.
Iikhitshi ezili-8 ezikhuselekileyo ezikhuselekileyo zokutyisa iintaka- iiNtaka zasendle intsalela yokutya okusetyenziswayo
Amakhaya ase-Bhritane ayacelwa ukuba alwe nokuhla kwenani lezilwanyana zasendle ngokondla iintaka ngenkunkuma yasekhitshini eseleyo, kubandakanya itshizi, imifuno kunye namaqanda. Khangela izinto ezikhuselekileyo zasekhitshini ezinokusetyenziselwa ukondla iintaka zasendle.
Imithi ekhulayo ngokukhawuleza ngokukhawuleza kwiGadi yakho - Imithi yeGadi yase-UK
Fumana imithi ekhula ngokukhawuleza e-UK eya kuthi ifike kubude bayo obugcweleyo kwiminyaka nje embalwa. Ukusuka kumthi weBirch ukuya kwiLombardy Poplar ukuya kwi-Eucalyptus, khangela ukuba yeyiphi imithi yegadi eza kunyuka ngokukhawuleza ukongeza umdla kunye nokwenza umthunzi kwindawo yakho yangaphandle.
Izitiya zase-UK-Iigadi ezili-10 ezigqibeleleyo zokundwendwela eli hlobo
Ukukhangela izitiya zase-UK ukutyelela? Ukusuka eKew Gardens eLondon ukuya eChatsworth eDerbyshire, ezi gadi zintle zase-UK zenza uhambo olufanelekileyo losuku.
Igadi yabaQalayo: I-10 yeMisebenzi yeGadi elula yokuqalisa
Entsha egadini? Ukwazi ngqo ukuba ungaqala ngaphi kunokuba nzima kuba ke zilishumi ezilula igadi yemisebenzi yabaqalayo ukuba bayisebenzise njengesiqalo.
Iindlela ezili-10 ezingaqhelekanga zokuNceda ingca ikhule- iHard Grass Hacks
I-Aspirin, igalikhi kunye nomchamo unokunceda ingca ikhule. Ukusuka kwizibulala-zinambuzane ezingaqhelekanga ukuya kwizichumisi ezingaqhelekanga, ezisetyenziswe ngendlela eyiyo, zininzi izinto ezingaqhelekanga ezinokunceda ukunika ingca yakho ukukhula kwangexesha lentwasahlobo.
Iindlela ezi-5 zokuSebenzisa iiNdawo zekofu eGadini
Beka imbiza yakho yekofu yemihla ngemihla uyisebenzise kakuhle egadini. Indawo yekhofi inokusebenza ngaphandle kwezityalo kunye neentyatyambo-nantsi into ekufuneka uyenzile.
Yile nto iPlanethi yethu ebiya kujonga ngayo ukuba iinyosi ziphelile
Kuyakwenzeka ntoni kwihlabathi lethu ukuba zonke iinyosi zingafa zife ngokupheleleyo? Iphulo elitsha libonisa uloyiko ngaphambi nasemva kwemifanekiso yeplanethi engaphantsi kweenyosi.
Ungawuphucula njani uMjelo wamanzi eGadi yakho
Iindlela ezisibhozo abaninimzi abaneminwe eluhlaza banokunceda ingca yabo kunye neebhedi zeentyatyambo zijongane nemvula kwaye zithintele ukuba zingamanzi.
Iimpawu ezi-10 eziphezulu ezitsala iinyosi- Iinyosi ezinobuhlobo ezikhulayo
Nikeza ukutya okuluncedo kwiinyosi kunye nezinye izinambuzane ezisasaza umungu ngelixa usongeza ezinye iintlobo ekuphekeni kwakho nolu luhlu olubanzi lwezona zilwanyana zilungele iinyosi.
Ividiyo: Uyakha njani itroli yakho ye-BBQ
Ngokulinda ihlobo, ngoku lelona xesha lilungileyo lokuba unike igadi yakho ukukhanya kunye nokwakha eyakho itroli ye-BBQ.
Ukuthenga indlu yeHedgehog -Izindlu ezili-10 zeHedgehog eziGadi zeGadi
Izindlu zeHedgehog zezokuhlala, ukuzala kunye nokulala ngaphakathi, ngelixa zibanika indlu ekhuselekileyo unyaka wonke kwizilwanyana. Thenga ezona makhaya zibhetele.
Iibhokisi zewindow- Amanyathelo alula alishumi okutyala ibhokisi yefestile
Iibhokisi zefestile yindlela elula yokuzisa umbala kwigadi yakho nakwindawo engaphandle. Ngendawo kwi-premium, inani elikhulayo labalimi basezidolophini batyala iibhokisi zefestile.
IAmazon Alexa Ngaba nguMncedisi wokuLima ongazange wazi ukuba uyafuneka
Nokuba ungumgadi wegadi onamava okanye umnwe oneminwe eluhlaza, iAmazon's Alexa (inkonzo yelizwi esekwe kwilifu) inokwenza ubomi bakho bube lula kakhulu ngokulima.
Ungayenza njani ifanitshala yemeko yeplanga yeenkuni - Khusela ifanitshala ngaphandle
UJo Behari ucebisa ngendlela efanelekileyo yokukhusela kunye nefenitshala yegadi engaphandle yemozulu ngaphandle.
Amanyathelo ama-6 okuguqula ishedi yakho endala yegadi
Namhlanje, iishedi kusenokwenzeka ukuba zibe nokufikelela kwi-Wi-Fi kunekiriva. Ngelixa zisathengwa ngeenjongo zokugcina, uninzi luguqulwe lwaba zii studio, iindawo zokusebenzela okanye indawo yokubuyela umva.
Indlela yokuncamathisela iibhaskithi ezixhonywe eludongeni lwezitena kunye nocingo
Ukuncamathisela iibhasikiti ezixhonywe eludongeni lwezitena kulula - uya kuyidinga into yokugrumba ngokwakha, ukulungisa udonga ngokuqinileyo kunye nokuqhuba kwakho kuseto lwesando.
Iingcebiso ezili-10 zokuCwangciswa kwegadi yePatio-Iingcamango zoyilo lwePatio
Kuninzi ekufuneka kuthathelwe ingqalelo xa kufikwa ekucwangciseni ipatio yegadi yakho egqibeleleyo, ukusuka kuyilo loyilo njengepavumente kunye nefenitshala, ukubambelela kuhlahlo-lwabiwo mali.
I-RSPCA Ibongoza ukuba amaKhaya aKuphephe ukuThintela iGadi
Amakhaya aceliwe yi-RSPCA ukuba ayithathele ingqalelo inethi yegadi, emva kokunyuka ngokukhawuleza kwenani lokubulawa kwezilwanyana.
Iimpawu ezi-9 eziGqwesileyo zeGadi kaMark Lane ezilula ukuze usebenze ngokuLula
Umbonisi weGadi weHlabathi uMark Lane ubambisene nomdla wokulima-impilo-mpilo ka-Thrive ukuqokelela uluhlu lwezixhobo zasegadini eziza kwenza ubomi bube lula.
ukhathalelo lwezityalo zekhala
imibala yepeyinti kumagumbi okulala aphezulu